Nhau, 01 Chivabvu 2017
Muvhuro 1 Chivabvu 2017
Chivabvu 01, 2017
Nyanzvi Dzotyira Kuwanda kweChirwere cheMalaria
Munyori musangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr Evans Masitara, vanoti veruzhinji vanofanirwa kumwa mapiritsi ekudzivirira Malaria kana vachishanyira nzvimbo dzinozivikanwa kuti dzine dambudziko reMalaria.
VaTsvangirai Vanoti Havasi Kuzotambira Kuti VaMugabe Vakunda Musarudzo Gore Rinouya
Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, richitsigirwa nemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC, VaMorgan Tsvangirai, raudza vashandi neveruzhinji kuti vavhotere shanduko musarudzo dza2018 vachiti izvi ndizvo chete zvichapedza matambudziko akatarisana nenyika.
Yadah Inorigwa neDynamos
Chikwata ichi chapunzirwa pasi kekutanga gore rino mushure mekudamburwa 1-0 neDynamos mumutambo wakanakidza zvikuru uyezve wakaunganidza chaunga muNationalSports Stadium.
Thembelami Ovaraidza Vazhinji muAmerica
Muimbi wenziyo dzechitendero, Themba Tagwireyi, uyo anozivikanwa nerekuti Thembelami, anoti ari kufara nematambirirwo akaitwa mimhanzi wake nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica kuMaryland ne Newyork uko akaridza mukupera kwesvondo.
VaBiti Vanoti Chirwirangwe cheVanopikisa Chinokwanisa Kubvisa VaMugabe
Mutungamiri webato rinopikisa rePeople’s Democratic Party, VaTendai Biti, vanoti parizvino vachiri kushanda nemumwe mubatanidzwa wemapato ezvematongerwo enyika unonzi Coalition of Democrats kana kuti CODE asi havana kuvhara goni kuti vashande nemutungamiri weMDC-T VaMorgan Tsvangirai
Misoro yeNhau dzaNhasi, Muvhuro, Chivabvu 01, 2017
Vashandi vemuZimbabwe vanobatana nepasi rose mukucherechedza zuva revashandi asi paine mutauro pamusoro pehurumende inonzi iri kuda kupatsanura hukama hwevashandi kuburikidza nehurongwa hwaitwa kuChinhoyi
Nera Inoti Yakagutswa neHurongwa hweBVR, Asi Ine Zvimwe Zvinyunyuto
Makambani maviri akabudirira anoti Laxton Group yekuChina neDermalog Identification Systems yekuGermany ndiwo akarakidza mashandiro emichina yawo, saka zvasarira ZEC ichishanda neState Procurement Board kuti vasarudze kambani inenge yakabudirira.
EU Yobatsiea Vechidiki neMamiriyoni Mashanu eMadhora
Sangano reEuropean Union neChishanu razivisa kuti richashandisa mari inodarika mamiriyoni mashanu emadhora mumabasa ekusimudzira vechidiki pamwe nekuvapa mukana wekupinda muzvirongwa zvebudiriro munyika.
Mutungamiri weNamibia, VaHage Geingob, Vanovhura ZITF Vachikurudzira Kudyidzana kweZimbabwe neNamibia
Vasati vatura mashoko avo, VaGeingob vamboshanyira nzvimbo dzakasiyana-siyana muZITF pamwe nemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vachiona zviri kuratidzwa pachirongwa ichi.
MDC-T Inoti VaKasukuwere Vakatyora Mutemo Apo Vakambomisa Makanzuru eChitungwiza
Mutauriri webato rinopikisa iri, VaObert Gutu, vanoti VaKasukuwere vakamhanyira kumedza kutsenga vachada, vasina kutanga vapa makanzura aya mikana yekuti vazvichenure kana kuzvisunga nenyaya sezvinodiwa nemitemo inobata makanzuru.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chishanu, Kubvumbi 28, 2017
Mutungamiri wenyika, vanotaura muBulawayo vachirumbidza chirongwa cheZITF